मुख्य पृष्ठप्रदेश १ समाचार स्वास्थ्यनेपालमा देखिएको नयाँ भाइरस थप सङ्क्रामक
सतर्क रहन विज्ञको सुझाव
विराटनगर/बेलायतमा पहिलो पटक देखिएको नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस नेपालमा पनि भित्रिएको पुष्टि भएपछि विज्ञले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।
हङकङस्थित विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्रयोगशालामा गरिएको जिनोम सिक्वेन्सिङमा तीन जना (दुई पुरुष एक महिला)मा सो भाइरसको नयाँ प्रजातिबाट सङ्क्रमित भएको पुष्टि गरेको हो ।
सङ्क्रमणको दर घटिरहेको तथा जनजीवन सामान्य हुँदै गएको बेलामा नयाँ भाइरस नेपालमा भित्रिनाले फेरि पनि आममानिसमा डर थपिदिएको छ ।
भाइरसको स्वरूप परिवर्तन अर्थात् म्युटेसन भइरहन्छ । त्यही क्रममा बेलायतमा स्वरूप परिवर्तन भएको कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजाति देखिएको हो ।
पुरानो कोरोना भाइरसभन्दा नयाँ भेरिएन्ट ७० प्रतिशत बढी सङ्क्रामक रहेको अर्थात् सर्न सक्ने क्षमता धेरै हुने विभिन्न अध्ययनले देखाइसकेको छ । जसकारण नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार भित्रनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको कोसी अस्पतालका सिनियर फिजिसियन डा. दीपक सिग्देल बताउँछन् ।
नयाँ भाइरसको सर्ने क्षमता पुरानोको भन्दा धेरै बढी भन्ने प्रमाणित भइसकेकाले स्वभाविक रूपमा पहिलेभन्दा धेरै मानिस सङ्क्रमित हुने जोखिम बढी छ । विदेशबाट आएका तथा विशेषगरी बेलायतबाट आएका मानिसलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नु एकदम आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सम्बन्धित निकायले तुरुन्त यससम्बन्धी नियमलाई कडाइँका साथ पालना गर्न जरुरी छ । भाइरस समुदायमा फैलिए नेपालमा यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको दोस्रो छाल (सेकेन्ड वेभ)को सुरुवात हुनसक्ने उनी बताउँछन् ।
सधैँभरि लकडाउन गरे पनि हुँदैन, त्यसकारण पहिलाको तुलनामा नयाँ भाइरसबाट बच्नका लागि थप सतर्क हुन जरुरी छ । सबैले सावधानीका उपाय नअपनाएको खण्डमा हामी फेरि पनि महामारीको अर्को प्रकोपमा जाने छौँ । त्यति बेला कुनै पनि अस्पतालले धान्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।
भाइरस तीव्र गतिमा फैलिने भएकाले नेपालमा यसको प्रसार व्यापक भएको खण्डमा अस्पतालले धान्न सक्दैन । भाइरस अत्यधिक सङ्क्रामक भएका कारण सङ्क्रमितको सङ्ख्या अवश्य पनि बढ्ने देखिन्छ, उनले भने, ‘सङ्क्रमित बढेसँगै सङ्क्रमणको अवस्था गम्भीर हुने, अस्पताल भर्ना हुनेको र मृतकको सङ्ख्या पनि अवश्य बढ्छ । र, यस अवस्थामा स्वास्थ्य प्रणालीले पक्कै पनि धान्न सक्दैन ।’
सेकेन्ड वेभको सङ्क्रमणमा खासगरी मानिसहरू सामान्य रुघाखोकी लागेको नभएर गम्भीर भई सिधै आइसियू तथा भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने बिरामी मात्र अस्पताल आउने हुन्छन् । यदि भाइरसको सेकेन्ड वेभ आएमा सरकारी अस्पतालले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने सबैको चासोको विषय रहेको छ । प्रत्येक अस्पतालमा एचडियू र आइसीयूको व्यवस्था हुनु पर्ने भए पनि व्यवस्थापन गर्न ढिला भइसकेको उनको भनाइ छ । साथै, उनले योप्रति कोही पनि गम्भीर नभएको बताएका छन् । कुनै पनि भाइरसको सर्ने तरिका, सङ्क्रमित भए देखाउने लक्षण र भाइरसबाट जोगिने रोकथामका उपाय एउटै हुने डा. सिग्देल बताउँछन् ।
हात धुने, सेनिटाइजरको प्रयोग, मास्क लगाउने तथा सामाजिक दूरी कायम गर्नु नै रोकथामका उपाय हुन् जुन धेरैजसो नेपालीले बिर्सिसकेका छन् । सधैँभरि लकडाउन गरे पनि हुँदैन, त्यसकारण पहिलाको तुलनामा नयाँ भाइरसबाट बच्नका लागि थप सतर्क हुन जरुरी छ । सबैले सावधानीका उपाय नअपनाएको खण्डमा हामी फेरि पनि महामारीको अर्को प्रकोपमा जाने छौँ । त्यति बेला कुनै पनि अस्पतालले धान्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।
नयाँ भाइरसबाट ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी तथा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या भएका युवामा समेत सरेमा मृत्युको जोखिम अवश्य पनि बढ्ने छ ।
नयाँ प्रकारको भाइरस थप सङ्क्रामक भएका कारण भाइरस नेपालमा भित्रनु गम्भीर चिन्ताको विषय रहेको साथसाथै यसले अझै धेरै चुनौती थपिएको जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ डा. नवराज सुब्बा बताउँछन् ।
विदेशबाट आएका मानिसबाट भाइरस सरेर एक–दुई गर्दै सुमदायमा समेत नयाँ प्रजाति फैलन सक्छ । साथै, कतिपयमा लक्षण नदेखि पनि भाइरस सर्न सक्ने हुँदा वा परीक्षणको दायरामा नआएको हुनसक्दा बेलायतबाट आएका तीन जनामा मात्रै भाइरस सीमित भएको कि अन्य तथा समुदायमा पनि भाइरस सरिसकेको पो हो कि भनेर भन्न नसकिने उनी बताउँछन् ।
‘नयाँ प्रजाति भारतलगायत अन्य धेरै देशमा समेत फैलिसकेको छ,’ उनले भने, ‘बेलायतबाट मात्र नभएर सङ्क्रमण जहाँबाट पनि फैलिने सम्भावना छ ।’ भाइरसको नयाँ प्रजाति थाहा नपाई भित्रभित्रै फैलिन सक्ने सम्भावना पनि धेरै छ । जसकारण तीन जनामा मात्रै भाइरस देखिएको भनेर ढुक्क हुने अवस्था नभएको उनी बताउँछन् । भाइरस पहिलेको तुलनामा धेरै सङ्क्रामक छ, जसकारण अवश्य पनि मृतकको सङ्ख्या पनि बढ्ने देखिन्छ ।
नयाँ भाइरसबाट ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी तथा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या भएका युवामा समेत सरेमा मृत्युको जोखिम अवश्य पनि बढ्ने छ । नयाँ प्रकारको भाइरसको सर्ने तरिका, सङ्क्रमण गर्ने लक्षित समूह, लक्षण पनि पहिलेको जस्तो नै हो, तर भाइरस पहिलेको तुलनामा बढी सङ्क्रामक भएका कारण सतर्कतामा थप ध्यान दिनुपर्ने उनले सुझाएका छन् । अन्य व्यक्तिसँग भेट्दा मास्क ठिक तरिकाले र अनिवार्य रुपमा लगाउने, भीडमा नजाने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, हातलाई नियमित रुपमा धुने वा सेनिटाइज गर्ने, सङ्क्रमितसँग टाढा बस्ने गर्दा भाइरस फैलिए पनि नसर्ने उनको भनाइ छ ।